Programme PROSPERER » “Tena mahavelona tokoa ny asa fihariana fambolena rehefa ifotorana”, hoy i DOMOHONARISOA “Tena mahavelona tokoa ny asa fihariana fambolena rehefa ifotorana”, hoy i DOMOHONARISOA – Programme PROSPERER
Efa sivy taona izao no niarahan’ity Tantsaha iray ity niara-niasa tamin’ny Fandaharanasa dia i Madame DOMOHINARISOA Herinarinjato izany. Talohan’ny nisitrahany ny tohana tamin’ny Fandaharanasa dia tany Tongarivo Tanjombato izy mivady no nipetraka ary samy niasa tamina orinasa afakaba. Rehafa niala tao dia nanokatra « épicerie » kely. Nahita tany novidiana izy ireo rehefa nahangona vola kely taty aoriana tao amin’ny Fokontany Ambohitsaratelo, kaominina Ambohimanga Rova izay mbola itoerany hatramin’izao. Fambolena legioma sy asa vato no fivelomany tamin’izany mandrak’ankehitriny.
Nanomboka teo no niarahany niasa tamin’ny Ivo fanoitra tao Avaradrano raha vao naheno ireo fanentanana samihafa nataon’ny mpitantsoroka amin’ny faritra izy ny taona 2010. Mba te hivelatra tamin’ny serasera ara-barotra sy ny fihariany tsy nisy mpanelanelana no naharesy lahatra azy tamin’izany ary mba te tonga mpandraharaha matihanina tanteraka.
Maro ireo tombotsoa azony hatramin’izao. Ao ny fahaiza-mitantana nahafahany nanitatra sy nanatsara ny asa fihariany satria sady namboly tokoa izy no nanao asa vato ary efa manam-paniriana hanao vokatra maro vita amin’ny vato amin’izao raha « gravillon », « moellon » sy « caillasse » ary biriky no nataony hatramin’izay.
Ao koa ny fahaiza-nanatsara ny kalitaon’ny vokatra vokariny satria teny am-piandohana dia 20 ara fotsiny no tany novoleny, nanofa tany fanampiny izy tamin’izany ary nanarama olona amin’ny fambolena. Amin’izao kosa dia efa mahatratra 1ha latsaka kely ny tany voleny ary efa zatra mividy vokatra aminy ireo mpanjifa nohon’ny hatsaran’ny vokany toy ny tsaramaso, angivy, sakay, haricot vert, laisoa, poivron sy ny sisa. Vokariny avokoa rehefa vokatra mifanaraka amin’ny vanim-potoam-pambolena rehetra. Ny nahatonga izany dia tsy inona akory fa nohon’ny fahazoany tohana ara-barotra niarahana tamin’ny mpandraharahan’ny tsena FOFIFA tamin’ny famokarana masomboly tsaramaso. Nahazo traikefa momba ny fikarakarana ny tany izy hatramin’ny fanamboarana zezika ara-biolojika samihafa hatramin’ny famoahana ireo vokatra izay tena nataony fahazarana ny fampiharana izany.
Ao koa ny tohana ara-piofanana momba fitantanana sy hay varotra ary ny kolo-tsaina fandraharahana izay nahafahany niatrika ireo olana nosedrainy teny antenantenam-pamokarana teny. Izany raha teo no nananany fahasahiana lalandava niara-niasa ary miara-miasa amin’ireo mpamatsy vola madinika rehetra izay niara-niasa ary mbola miara-miasa amin’ny Fandaharanasa ankehitriny ka nahafahany manatsara sy manitatra ireo asa fivelomany ireo.
Manodidina eo amin’ny Dimy hetsy sy iray tapitrisa eo ho eo ny vola azony amin’ny fambolena ataony anatin’ny taona iray raha Efapolo tapitrisa eo ho eo kosa no azony amin’ny asa vato.
Maro ireo olana nosedrainy nandritra izay 9 taona izay saingy tsy kivy izy satria efa tena mpandraharaha tokoa. Tamin’ny taona 2014 ohatra dia mora be ny vidina laisoa izay nalefa 50 Aiary ny iray kanefa ny masokarenan’ny laisoa iray 150 Ariary, ny Sakay rehefa fotoanany 1500 Ariary ny kilao kanefa rehefa Desambra sy Janoary dia amidy 200 Ariary ny kilao ary mbola iainana io tranga io matetika isan-taona.
Misy fotoana koa ny làlana hamoahana ny vokatra tena ratsy ka mandany fotoana be ho an’ny mpamokatra ary mahatonga ny fahamoran’ny entana satria manantona ety an-toerana ireo mpanjifa. Ao koa ny fisian’ny hala-botry eny an-tsaha.
Na dia izany aza anefa dia tsy nahakivy azy izany rehetra izany satria efa nametraka tanjona izy teny am-boalohany hoe tsy maintsy hanana tany midadasika hovolena, azo anaovana voly avotra ary tena mahavelona.
Efa nahavita nampiakatra ny trano fonenany izy ankehitriny ary efa niova tokoa ny farim-piainany. Efa nanitatra ny asany koa amin’ny fananganana trano sy fividianana masinina fitotoam-bary hamonjena ireo mpiara-monina manodidina aminy izy satria kilometatra maromaro vao mahita izany. Eo ankilany ny fampianarana ireo zanany eny amin’ny ambaratonga ambony izay tena mitaky fandaniana mavesatra. Izany dia mbola noho ny fikirizany sy ireo tohana maro samihafa avy amin’ny Fandaharanasa FANOITRA. Mbola manam-paniriana izy hanitatra hatrany ny famboleny ary hanorina trano ho an’ireo taranany.
Rehefa nanontaniana ity mpandraharaha ity dia tena mahavelona tokoa ny asa fambolena legioma rehefa tena ifotorana sy tiavina miaraka amin’ny fananana toe-tsaina mpandraharaha.
Efa azo lazaina ho mahaleo tena tanteraka izy eo amin’ny sehatry ny fandraharahana satria efa maro ireo mpanjifany nohon’ny hatsaran’ny kalitaon’ny vokatra vokariny sy ny fahaizany miserasera amin’ny sehatra maro na eo amin’ny fambolena legioma na eo amin’ny asa vato. Izany raha teo moa no tanjon’ny Fandaharanasa hatramin’izay dia ny mba hahaleo tena avokoa ireo mpahazo tombotsoa avy aminy rehefa tapitra ny fe-potoana iasany.
Aujourd'hui : 32 vues | Cette semaine : 1152 vues | Total : 6444 vues